Sababaa Liyyuu Poolisiniin Lammiileen Oromoo Qabeenya Isaanii Saamaman Maal Keessa Jiruu?? | QEERROO
Sababaa Liyyuu Poolisiniin Lammiileen Oromoo Qabeenya Isaanii Saamaman Maal Keessa Jiruu??
Posted on September 29, 2017 by Qeerroo
Maqaa saboota ollaa keessattuu maqaa olloota daangaa Oromiyaan dahatee sirni gita bittuu Wayyaanee uummata Oromoo irratti loltoota bifa addaan biyyoota awuroophaa faana waliin ta’uun leenjifate itti bobbaaseen Oromoon kumoota hedduun lakkaahaman ardaa isaanirraa buqqaa’anii jiru. Ilmaan Oromoo garraamiin kun badii tokko malee rakkoo daangaa irraan xuxxuuqqaa jirus utuu quba hinqabaatin Sumaalee bakkoota Jijjigaaf, Wucaalee keessa dararaa hamaan irra dhaqqabeera. Dararaa gara jabeenyaa hamaa kanaan uummatni keenya kumootaan qabeenyaa isaanii mara dhabanii kan deemaan cinatti miidhaa suukaneessaan irra dhaqqabee jiraachuu dubbatu. Lammiilee Oromoo manaaf qabeenya isaanii dhabanii Oromiyaatti baqatan keessaa , gurmuu gara Oromiyaa Lixaatti qubsiifamanii jiran akka arginee haasofsiifnetti. Ilmaan Oromoo waan tokko wal dhabdee takka utuu gurraan hindhaga’in dararaa hamaan irra dhaqqabee jira jedhu. Daraaraawwan suukanneessoo kanneen keessaa keessattuu
Dhiira qaama hormaataasaa, muruu, dubara harmaa irraa muruun kaanimmoo baajajjitti hidhanii harkisanii , kaanimmoo Billaan morma ciranii kaanimmoo rasaasaan ajjeesanii nu daraaran jechuun bifa akka malee nama gaddisiisuun bilbilaan nuuf himanii jiru. Dararaa kana akka malee mufachiisaa ta’uu isaa yoo nuuf himan garaa akka malee nu madeessuun dararaa akkanaan miidhamuu lammiilee keenyatti xiiqiif aarii hamaa keessa nu galcheera. Ilmaan Oromoo qaqqaaliin kunneen harka qullaa qe’ee isaanii gadhiisanii bahuu cinatti lubbuu keenya malee humaa hinqabnu. Maatiin gartokko du’ee kan du’arraa hafanis wal argaa akka hin jirre dubbatan. Haala deggarsa adeemaa jiruus gaafannee jirra.Yaada deggarsaa Akkam feggaramaa jirtuu ka jedhu akka nuuf kaasanitti marii irra akka jiramuu nuuf himan. Mariin sunis qubsuma lafaa kan kennisiisuuf ta’uu dubbatu. Haa ta’u malee maatii keenya ardaa isaa dhabee jiru kana qubsuma lafaa cinatti maatii isaanii irraa citanii biyya hormaatti hafan kanaan wal agarsiisuuf carraaquun hangafa. Akka iyyaafannetti ilmaan Oromoo buqqaa’an kunneen manneen barnootaa, kolleejjiiwwaaniifii waajjiroota mootummaa tokko tokko keessatti walitti qabamanii jiraachuudha.
Ilmaan Oromoo kunneen furmaataaf mala gaafanneen bifa garaa nama moogessuun falli tokkittii isaan qabaniif qaamni isaan itti iyyachuu danda’an mootummaa naannoo Oromiyaa alaan fala biraa akka dhabanillee dubbatu. Lammiilee konkolaataa gurguddaa 80 oliin maatii isaanii dhaban kanaaf habukaattoo jabaan dhibuunillee hammam akka nama gaddisiisu tilmaamuun nii danda’ama. Biyyoonni Ollaas ta’ee biyyoonni alaa keessaa kan dubbatuuf dhibuu nama hubachiisa. Isa kana shaffisaan gurra addunyaa cina gahuu dhabuun isaallee hammam akka hanqinni jiru nama agarsiisa. Yaadota Ilmaan nagaa ilmaan Harmee qe’ee isaanii dhabanii bilbilaan Jaal Michuu Lammii akkanaan haasofsiise…
Egaan qaamni odeessa kana dhaga’e kamuu Akka cina dhaabbatu gaafanna. Oromoon biyya isaa keessa jiraachuu dhabuu cinatti biyyoota naannoo isaallee jiraachuu akka hinqabne taasifamaa jira. Kanaaf firaaf falmaan keenya wal malee qaama biraa akka hintaane gamanumaan dhaamna.
Turtii nu waliin gootaniif ulfaadhaa
1 thought on “Sababaa Liyyuu Poolisiniin Lammiileen Oromoo Qabeenya Isaanii Saamaman Maal Keessa Jiruu??”
Pingback: Sababaa Liyyuu Poolisiniin Lammiileen Oromoo Qabeenya Isaanii Saamaman Maal Keessa Jiruu?? – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA